बिहिवार, मंसिर ११, २०७७ ०३:४९:१४ Thursday, 26 November, 2020
शनिवार, कार्तिक ८, २०७७ News Missile
काठमार्डौ । नवरात्रका अवसरमा राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड लाग्ने गरेकामा यो वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण धेरै मन्दिर बन्द रहेका छन् ।
नवरात्रमा अधिकांश शक्तिपीठमा मन्दिरबाहिरैबाट दर्शननखुलेपछि यस वर्ष केही भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष दीनेशकुमार डङ्गोलले जानकारी दिएको हो।
यसैगरी पशुपति क्षेत्रकै जयवागेश्वरी लगायत शक्तिपीठमा पनि बाहिरबाटै भक्तजनले दर्शन गरिरहेका छन्।
भौतिक दूरी कायम गरेर आज बिहानसम्म मैतीदेवी मन्दिर प्रबन्ध समितिले निर्णय गरी खुला गरिएको थियो। बिहान ७ बजेपछि भने प्रहरीले माथिको आदेश छ भन्दै मन्दिर बन्द गरेको महानगरपालिका–३० का वडाध्यक्ष समेत रहेका मन्दिर प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले बताए।
मन्दिरमा साङ्लो लगाएर एक÷एक जना मात्र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समितिले जनाएको छ। प्रहरीले मन्दिर बन्द गराएपछि भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरी फर्किने गरेका छन्।
महानगरपालिका–२९ स्थित कालिकास्थान मन्दिर भने भौतिक दूरी कायम गरेर खुला राखिएको अध्यक्ष कुश ढकालले बताए।
मन्दिरमा स्थानीय भक्तजनमात्र आउने भएकाले एक एक गरी दर्शन गर्न दिइएको छ। स्वयंसेवक खटाएर भक्तजनलाई २ मिटरको दूरीमा राखी सुरक्षित रुपमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कालिकास्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव हरि लामाले जानकारी दिए।
महानगरपालिका–११ स्थित भद्रकाली मन्दिर समेत भक्तजनका लागि बन्द गरिएको वडा अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले बताए। बन्द गरिए पनि केही भक्तजन भने दर्शन एवं सवारी साधन पूजा गर्ने भन्दै भद्रकाली परिसरमा जम्मा भएका छन्।
काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं.२२ मा पर्ने सङ्कटा मन्दिर पनि बन्द गरिएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने खतरा देखिएकाले नित्य पूजाबाहेक सबै भीडभाड बन्द गरिएको वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले बताए।
यसैगरी प्रत्येक हप्ता शनिबार साँढे साती एवं शनिको अढैया भएकाको भीड लाग्ने महाङ्काल मन्दिर पनि बन्द गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-१ स्थित चार भगवतीमध्येको एक नक्साल भगवती मन्दिर पनि मूल ढोकामै ताला लगाई बन्द गरिएको छ। मन्दिर परिसरमा आउने भक्तजन सडकबाटै दर्शन गरेर हिँड्ने गरेको वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यस्तै वडा नं. १५ मा पर्ने शोभा भगवती मन्दिरमा भने मूल ढोकासम्म पुगेर दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वयंसेवक राजाराम कपालीले बताए। मन्दिरमा शुक्रबारभन्दा बिहीबार बढी भक्तजन लाम लागेका थिए।
यसैगरी विष्णुमती नदी किनारमा रहेको कङ्केश्वरी मन्दिरमा पनि दूरी कायम गरी दर्शन गर्न दिइएको छ। त्यस क्षेत्रका रक्तकाली, श्वेतकाली, बिजेश्वरी लगायत मन्दिरमा दुरी कायम गर्दै सीमित भक्तजनलाई दर्शन गर्न दिइएको १९ नं. वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गीले बताए।
त्यस्तै राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित शङ्खरापुर नगरपालिका-८ स्थित प्रसिद्ध बज्रयोगिनी मन्दिर पनि भक्तजनको भीड बढ्न थालेपछि बिहीबारदेखि सूचना प्रकाशन गरी बन्द गरिएको नगर प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष हितमान तामाङले बताए।
मन्दिर बन्द भएपछि त्यहाँ पुग्ने भक्तजन बाहिरबाट दर्शन गरेर फर्कने गरेका छन्। मन्दिरमा फूलपातीदेखि महानवमीसम्म बढी भीड लाग्ने गर्दछ। मन्दिर महानवमीसम्मका लागि बन्द गरिएको छ।
यसैगरी गोकर्णेश्वर नगरपालिका-५ स्थित चामुण्डा मन्दिर भने दूरी कायम गरी खोलिएको छ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गोकर्णेश्वर-१ मा पर्ने सुन्दरीमाई मन्दिर पनि खुला छ। भक्तजन आफैँ दूरी कायम गर्दै दर्शन गरेर फर्कने गरेका छन्। मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि भक्तजन लाममा बसेका छन्।
दक्षिणकाली नगरपालिका-६ स्थित प्रसिद्ध दक्षिणकाली मन्दिर पनि बन्द गरिएको उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङले जानकारी दिए। मन्दिर पुग्ने भक्तजन भने बाहिरबाटै दर्शन गरेर फर्कने गरेका छन्। खोलिएका मन्दिरमा पनि बली पूजा भने स्थगित गरिएको छ। बन्द गरिएका शक्तिपीठमा पनि पुजारीले नित्य पूजालाई भने निरन्तरता दिएको छ।
प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रको फूलपातीदेखि महानवमीसम्म देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण घरमै बसेर वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले दुर्गा भवानीको उपासना गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिवार, कार्तिक ८, २०७७, ०९:१०:००
श्रद्धा भक्तिपूर्वक उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य
छठ पर्व : अस्ताउन लागेको सूर्यलाई अर्घ दिई पूजापाठ
हर्षाेल्लासकासाथ छठ पर्वकाे तयारी
मगलवार, मंसिर २, २०७७ News Missile
प्रधानमन्त्री ओलीबाट तिहारको भाइटीका ग्रहण
सोमवार, मंसिर १, २०७७ News Missile